ဥရောပမှာတော့ Coradia iLint အနိမျ့-မြင်းစီးရထား | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့ Coradia iLint အနိမျ့-မြင်းစီးရထား
ဥရောပ၌ရထားလက်မှတ်တွေဝယ်ယူအမြဲစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားမှာကျွန်တော်အမြဲသင်တို့အဘို့တန်ဖိုးနည်းရထားလက်မှတ်တွေကိုရှာဖွေနေကြသည်. ကျနော်တို့ကောင်းတဲ့တူသောအကြောင်းအရာများစူးစမ်းကြပါပြီ ဟိုတယ်များ နှင့် လှပသောရထားခရီး. ဒါပေမယ့်မီးရထားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခေတ်အစားဆုံးခေါင်းစဉ်အတွက်ဖြစ်ပါသည် ပတ်ဝန်းကျင်. The Coradia Ilint is the world’s first low-riding train. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဖြစ်နိုင် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတရထား.
အဆိုပါ Coradia Ilint တစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်-based နိမ့်စီးနင်းရထားဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဂျာမနီနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား journeys. အသစ်ရထားမကြာသေးမီက 4-ရက်သတ္တပတ်စမ်းသပ်ပြေးပြီးစီး. အဆိုပါစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်း, ရထားမှာသွား၏ 80 တစ်နာရီကို KM. စမ်းသပ်မှုများလည်းရထားများအတွက်အားလပ်ချိန်အကဲဖြတ်. ဆဲသောအခြားရှုထောင့် စမ်းသပ်ပြီးခံရ ချောမွေ့တဲ့မီးရထားခရီးသေချာစေရန်.
အသစ်ရထားကမ္ဘာပထမဆုံးဟိုက်ဒရိုဂျင်-powered လောင်စာဆဲလ်ရထားဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲဘို့လျှပ်စစ်ပါဝါကိုအသုံးပြုသည်. Meaning it will give off zero emissions only emitting condensed water and steam. ရထားအသံတိတ်ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ Coradia Ilint နိမ့်စီးနင်းရထားအောက်ပါထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါတယ်;
အဆိုပါဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲတန်ခိုးတော်နှင့်မရရှိနိုင်စွမ်းအင် smart စီမံခန့်ခွဲမှု
တိုယိုတာ ယင်းချဉ်းကပ်မှုသာရထားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်နဲ့တူလည်းမိမိတို့၏ကားများကိုဤဟိုက်ဒရိုဂျင်ချဉ်းကပ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပုံ. အဆိုပါမီးရထားထဲတွင်ဗြိတိန်တွင်စတင်ရန်စီစဉ်ထားသည် 2021. Coradia Ilint low-riding train launched successfully in addition in Germany at the beginning of 2018. In order for the train to operate it needs its own hydrogen refueling station which currently is located on the Salzgitter tracks.
Frankfurt ရထားမှ Cologne
မြူးနစ် Frankfurt မှရထား
Frankfurt ရထားမှ Hanover
Didier Pfleger, Alstom ဂျာမနီနဲ့သြစတြီးယား Said ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ;
“ထို့အပြင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲစနစ်, ဒါဝေးကိုအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်လက်စွပ်ပေါ်မှာသက်သေပြ, ဥရောပတိုက်တွင်သန့်စင် mobility ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့အဓိကကျသည့်ခြေလှမ်းတရပ် - ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ရထားပေါ်တွင်အသုံးပြုသည်”
စုစုပေါင်းရှိပါတယ် 14 Coradia Ilint ဥရောပတိုက်တွင်အနိမ့်စီးနင်းရထား. သူတို့ဒီဇယ်ကိုသုံးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကရထားလက်ရှိရထားကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်. အများစုမှာမှတ်သားဖွယ်, အဆိုပါရထားကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါတယ် 1000 တဦးတည်းအကြံပေးအဖွဲ့ Refill အပေါ်ကီလိုမီတာ.
အာနက Dongen, ယင်းပို့ဆောင်ရေး၏ဖက်ဒရယ်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အအုံမှာပါလီမန်ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူး (BMVI), ကပြောသည်:
“ထုတ်လွှတ်-အခမဲ့, စွမ်းအင်ထိရောက်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော – လောင်စာဆဲလ် drive ကိုအတူ trainsets ဒီဇယ်စက်ခေါင်းအားလုံးကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတအခြားရွေးချယ်စရာအများစုဖြစ်ကြသည်. အောက်ပိုင်း၏စက်မှုဇုန် site ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ Saxony, ကျနော်တို့န်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် LNVG ရဲ့ပရောဂျက်များအတွက်ရန်ပုံငွေများချင် 8.4 ယူရိုသန်း. အဆိုပါရန်ပုံငွေများကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်ဆီဆဲလ်များအတွက်အမျိုးသားတီထွင်ဆန်းသစ်မှုအစီအစဉ်ကနေထောက်ပံ့ပေးခံရဖို့ရှိပါတယ် နည်းပညာ“
ဥရောပ၌ရထားလက်မှတ်တွေကိုဝယ်. ထို့အပွငျ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည်လှသောအဆင်းခရီးသို့မဟုတ်သင့်လိုရာခရီးရောက်ဖို့ရိုးရှင်းစွာအလျင်မြန်ဆုံးနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးလမ်းကြောင်းရှာကြသည်, အကြှနျုပျတို့သညျဖုံးအုပျတယ်ပါပြီ. Enter now to တစ်ဦးကရထား Save, ကိုယ်ကသာကြာ3minutes to use our search engine to get the best-valued tickets available.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/worlds-first-low-riding-train/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / ကသို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ja ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#lowriding ပတ်ဝန်းကျင် ရထား
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား